Jabkii Cabdiraxmaan Maadey iyo Al Jazeera - Cakaara News
Jabkii Cabdiraxmaan Maadey iyo Al Jazeera
Jijiga ( cakaaranews ) Talaado, 31 may 2016. Telefishinka caalamiga ah ee Aljazeera ayaa UBBO dhulka ladhacay kadib markuu soo bandhigay xaqiiqada dhabta ah ee deegaanka kajirta ee uu Cabdiraxmaan maadey beenta kasheegay.
Sida lawa ogsoon yahay, Hogaamintii hore ee UBBO iyo qab-qablayaashii soomaaliya gaar ahaan C/raxmaan Maadey oo ah nin aan dhanayn dhakhaatiirta caalamkuna uqortey inuu markasta dhageysto muusiqa nooca shucaaca leh ee lagu daweeyo qayb kamid ah waalida ayaa wuxuu wareysi been abuur ah oo deegaanka khuseeya bilihii lasoo dhaafay siiyay Aljazeera isagoo xaalada dhabta ah ee deegaanka ogaa. wuxuuna baryahanba wadnaha farta kuhayay xiliga lagaga daba-iman doono ee lafashilin doono beentiisii ahayd "Dibi baa sac dhalay".
Hadaba wariyeyaasha TVga caalamiga ah ee Aljazeera oo baryahanba kusugnaa deegaanka soomaalida itoobiya si ay uxaqiijiyaan xaalada dhabta ah ee kajirta deegaanka ayaa been abuur cad kutilmaamay waraysigii Maadey iyagoo sheegay inay aad ugaxumaadeen beenta intaa le'eg ee xataa sumcada TVga wax u dhimaysa. waxayna UBBO ugarwaaqsadeen inay yihiin urur argagixiso ah kadib markay arkeen ardeyda Agoonta ah ee kuxaraysan dugsiyada Hoyga ee waalidkood UBBOdu laysay islamarkaana ay xukuumada deegaanku gacanta kuhayso.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoon wax jawaab ah laga bixinin wareysigiisii hore ee beenta ahaa ee uu siiyay Aljazeera ayay ugu horaynba dhamaan dadka afka soomaaliga kuhadla iyo caalamkuba layaabeen been abuurka cad ee uu kasheegay horumarka iyo nabadgelyada deegaanka soomaalida kajira ee isaga dib ugu noqotay.
Aduunow futa-xume, C/raxmaan Maadey ayaa markuu fashilaada wareysigiisii maqlay waali kudhuftay oo dibna dhagaha ugashaday muusiqiisii shucaaca lahaa ee lagu yaqaanay. waxaase wax aad loogu farxo ah sida ay Aljazeera isula doonatay beentiisii iyo xaqiiqada, iyo waliba jawaabta ay wiilashii shalay fikirka laga khalday bixiyeen. Taas oo aan wax loo dhigo jirin.
Horaa loo yidhi "dawaco meesha ay macal uga baratay ayay macaluul ugu dhimataa". Taas oo kadhigan in Maadey uu wali ka samri la'yahay dhiigii iyo dhicii umada oo uu qaadan la'yahay wiilasha yaryar ee ka afqabtay. Arintan ayaana ah mid ay shacabka deegaanka iyo qurbajoogtuba aad ulayaabeen.